China Manual Swing Door For Hospital Application single Open elu mma akwụkwọ ntuziaka swing ọnụ ụzọ na aluminum alloy efere maka 10years akwụkwọ ikike na-emepụta na suppliers |Moenke
Ọnụ ụzọ Swing ntuziaka maka ngwa ụlọ ọgwụ otu Mepee ọnụ ụzọ swing dị elu nke nwere efere alloy aluminum maka akwụkwọ ikike afọ 10
Aha Ọnụ ụzọ Swing ntuziaka Maka ngwa ụlọ ọgwụ otu mepere emepe
Ebe Mmalite Shandong, China (Mainland)
Kpochapụ nha 900*2100
Efere ọnụ ụzọ 0.8mm galvanized ígwè mpempe akwụkwọ, ntụ ntụ ntekwasa
Ọnụ ụzọ Alu alloy, ntụ ntụ kpuchie
Agba elu Organge mkpuchi ntụ ntụ
Isi ihe Akwụkwọ mmanụ aṅụ
Oke ọnụ ụzọ 40mm
Lelee windo 400*400
Agba Plate 0.8MM SS304
Ngwa ngwa SS304 hinges, SS304 lever handle na lockset
1. Ọnụ ụzọ ahụ sitere na mmụọ nsọ nke ndị na-emepụta ọkachamara, ụdị dị iche iche iji gboo ihe ndị dị iche iche ahaziri n'aka ndị ahịa anyị, karịsịa maka akwa akwa, ọnụ ụzọ mkpofu, ụlọ inyeaka, ụlọ ọrụ, wdg.
2. Okpokoro mgbidi dị iche iche dị, yana akwa mkpuchi mkpuchi roba dị elu iji gboo mkpa ịdị ọcha.
3. The ọnụ ụzọ efere na-mere site aluminum alloy okpokolo agba na ígwè ụzọ efere, n'ime isi ihe nwere ike ịbụ aluminum alloy mmanụ aṅụ ma ọ bụ polyurethane ụfụfụ, sinking roba akara warara nwere ike tinye na ala nke ọnụ ụzọ.
4. Mkpọchi ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ dị nso, mmiri ala ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ dị.
5. Nkenke n'ichepụta site na ihe ịzụrụ na mmepụta usoro ruo ngwaike ngwa iji hụ na ezi àgwà ngwaahịa na ogologo ngwaahịa ndụ-ogologo.
6. Ngwa ngwa ngwa dị elu, ọmarịcha anya na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
Ihe osise Desgin
Mwepu akara Frame
1.2mm aluminum alloy Frame.Strong na mfe arụnyere.
5mm+5mm Igwe ọkụ okpukpu abụọ,Enweghị nkebi na antifogging.
Saffty Aluminom mmanụ aṅụ panel,Ọkụ na-eguzogide, Bocteria eguzogide, mmiri resitant na Radiation Resitant.
Ihe mmeghe dị mma
Ubi dị mkpa
1. A ga-aza ajụjụ gị n'ime awa 12.
2. Srtong Moenke otu nwere ike na-enye ụdị nke imewe izute gị chọrọ.
3. ngwa ngwa nnyefe, samples ụbọchị nnyefe na 1-3 ụbọchị.Ọnụ ego na 7days.
4. OEM / ODM ọrụ, ndị ahịa 'nkwakọ ngwaahịa na Logo imewe na-anabata.
5. Nchekwa ahịa,desigh na ozi nzuzo niile nke omenala.
Ajụjụ: Ọ bụ azụmaahịa mba ụwa.Kedu otu m ga-esi chebe mmasị m ma ọ bụ tụkwasị ụlọ ọrụ gị obi?
A: Moenke bụ ihe karịrị 10years Gold soplaya na China.Moenke agafeela ISO9001: 2015 na asambodo usoro mma.
Ajụjụ: Ị bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Moenke bụ ihe nrụpụta maka ọnụ ụzọ ụlọ ọgwụ dị na Shandong China.Nnọọ ka ị gaa na ụlọ ọrụ anyị.
Ajụjụ: Kedu maka ngwugwu gị?
A: ngwugwu anyị bụ pallets osisi, anyị na-anabata OEM.
Ajụjụ: Nke a bụ ọnụ ụzọ akpaka mbubata m nke mbụ, amaghị m otu esi ebubata?
A: Echegbula onwe gị, Moenke nwere afọ 10 na mbupụ.Anyị nwere ike inyere gị aka ịchekwa oge na ego gị ma.
Ajụjụ: Ị nwere ike ịnye sample maka ịdị mma ule?
A: Ee, sample dị.Mana onye ahịa nkịtị ga-akwụ ụgwọ maka ọnụ ahịa awara awara yana ụgwọ nlele.
Nke gara aga: Ọnụ ụzọ swing akwụkwọ ntuziaka maka ngwa ụlọ ọgwụ otu na ọkara mepere ọnụ ụzọ swing dị elu na efere aluminom Alloy Plate For 10years Warranty
Osote: Ọnụ ụzọ na-arụ ọrụ ụlọ ọgwụ na-emepe emepe ugboro abụọ dị elu nke ikuku na-ejide onwe ya na efere aluminom Alloy Plate For 10years Warranty
Ọnụ ụzọ eji akwụkwọ ntuziaka maka ngwa ụlọ ọgwụ na-abụ abụ...
Akwụkwọ ntuziaka X-RAY ụlọ ọgwụ na-arụ ọrụ ọnụ ụzọ dị elu qual ...
Ọnụ ụzọ Swing ntuziaka maka ngwa ụlọ ọgwụ Otu ...
Ọnụ ụzọ eji akwụkwọ ntuziaka maka ngwa ụlọ ọgwụ ugboro abụọ ...
Ọnụ ụzọ eji akwụkwọ ntuziaka maka ngwa ụlọ ọgwụ abụọ...
Ọnụ ụzọ eji eji akwụkwọ ntuziaka maka ngwa ụlọ ọgwụ Si...